အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေ အပေါ်မှာ အရမ်းကြင်နာယုယလွန်းတဲ့ သခင်များ - Shwe Khit Online TV
HomeFunအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေ အပေါ်မှာ အရမ်းကြင်နာယုယလွန်းတဲ့ သခင်များ
January 29, 2021 Bo Bo Fun 0
ရွှေခေတ်ပရိသတ်တွေထဲမှာ ခွေးလေးတွေ ကြောင်လေးတွေလိုမျိုး အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို မွေးမြူထားတဲ့သူတွေရှိလားမသိဘူးရှင့် … ။ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အခုဖော်ပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာလေး မှာပါမယ့် သခင်တွေလောက် မိမိရဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေ အပေါ် ဂရုစိုက်ရဲ့လားဆိုတာ တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါဦးနော် … ။ shwekhitonlinetv.com
၁။ မိုးရွာနေပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့ခွေးကလေးနဲ့အတူလမ်းလျှောက်ထွက်ချင်သောအခါ … ။ shwekhitonlinetv.com
၂။ ဒီခွေးလေးရဲ့ ပိုင်ရှင်မိန်းကလေးဟာ သူ့ချစ်သူနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂) နှစ်လောက်ကတည်းက လမ်းခွဲထားကြတဲ့သူတွေလို့သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမရဲ့ကောင်လေးကတော့ သူတို့မွေးထားခဲ့တဲ့ ခွေးလေးရဲ့ မွေးနေ့ရောက်တိုင်း ခွေးလေးအတွက် မွေးနေ့ပို့စ်ကတ်တွေပို့ပေးနေတုန်းပါပဲတဲ့။ shwekhitonlinetv.com
၃။ ဒါကတော့ ခရီးသွားချိန်သူ့ခွေးလေးကို ကားနောက်ခန်းမှာထားတဲ့အခါ မျက်ခန်းခြောက်မှုကနေ ကာကွယ်ဖို့အတွက် မျက်မှန်တပ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အတော်လေးလဲ စေ့စပ်သေချာလွန်းတဲ့ သခင်ပါပဲနော် … ။ shwekhitonlinetv.com
၄။ သူမရဲ့ယုန်ကလေးကတော့ မွေးကတည်းက နားရွက်မပါလာခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူမရဲ့ယုန်ကလေးအားမငယ်စေဖို့ ကြံဖန်ပြီးတော့ ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၅။ ဒီပုံကတော့ မြင့်လွန်းတဲ့ အိမ်လှေကားကိုမတက်နိုင်တဲ့ ခွေးကြီးအတွက် သူ့သခင်က လှေကားထစ်အပိုလေးတွေ ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၆။ သင့်အတွက်မွေးနေ့ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဂရုတစိုက်အမှတ်တရ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးမယ့်သူ ရှိပါသလား ? ဒီခွေးလေးကတော့ အတော်ကံကောင်းတဲ့ ခွေးလေးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူ့အတွက် မွေးနေ့ကို ဂရုတစိုက်ကျင်းပပေးမယ့်သူရှိတယ်လေ … ။ shwekhitonlinetv.com
၇။ အပြင်မှာမကြာခင် မိုးကြိုးမုန်တိုင်းကျရောက်တော့မယ် အန္တရာယ်ရှိတာကြောင့် သူ့ခွေးလေးကို ဂီတသံစဉ်တွေနဲ့ အိပ်ရေးမပျက်စေတဲ့ သခင်။ shwekhitonlinetv.com
၈။ ဒီလိုမျိုးလုပ်ထားတော့ ကြောင်လေးတွေ အပြင်မထွက်တော့သလို အပျင်းလည်းပြေတာပေါ့။ အတော်လေးကို ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သခင်ပါပဲနော် … ။ shwekhitonlinetv.com
၉။ ဒီခွေးလေးကတော့ ကိုယ်ပိုင် သီးသန့်အခန်းလေးပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ အမယ် သူ့အခန်းမှာ သူ့ရဲ့အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံတွေဘာတွေတောင်ချိတ်ထားသေးတယ်နော် … ။ shwekhitonlinetv.com
၁၀။ ဝိုး ….. ဒီခွေးလေးရဲ့ ဒီဇိုင်းကအထာကျလွန်းပြီး အတော်လေးကိုလည်း ဇိမ်ကျနေပုံပါပဲ။ shwekhitonlinetv.com
၁၁။ Safety First ! ကားစီးရင် ခါးပတ်ပတ်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
၁၂။ ဒါကလည်း မွေးရာပါနားရွက်မပါလာတဲ့ ခွေးကလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြင်နာတက်တဲ့ သူ့သခင်က အစားထိုး နားရွက်ကလေးတွေပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၁၃။ အဆစ်အမြစ်တွေရောင်ယမ်းတဲ့ ရောဂါရှိနေတဲ့ ခွေးကလေးကို သက်တောင့်သက်သာရှိစေဖို့ သူ့သခင်က မွေ့ယာ၊ ခေါင်းအုံး၊ စောင် အပြည့်အစုံဝယ်ပေးထားလေရဲ့ … ။ shwekhitonlinetv.com
၁၄။ ဒီအကောင်လေးကတော့ သူ့အတွက်ပေးတဲ့ လက်ဆောင်အရုပ်ကလေးကိုအတော်လေး ကြိုက်နှစ်သက်ပုံရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၁၅။ အေးနေတဲ့ခွေးကလေးကို ရေနွေးပုလင်းလေးနဲ့ နွေးထွေးအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ သခင် … ။ shwekhitonlinetv.com
အခုလို ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်။ ဒီထဲမှာ ဘယ်ပုံလေးက စိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းလဲဆိုတာ ကွန်မန့်မှာ ပြောပေးသွားပါဦးနော်။